Midira amin'ny Team Hodges U! Jereo ny fahafahantsika miasa
Vonona handray anjara amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny fampianarana ambony ve ianao?
Ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia manolo-tena hampiasa ireo mpampianatra sy mpiasa mahay indrindra izahay hanohanana ny mpianatsika amin'ny lalan'izy ireo mankany amin'ny fahombiazana. Raha maniry hanampy ny hafa hahatratra ny tanjony ianao, dia tianay ianao ao amin'ny ekipanay. Raha toa anao ity, misafidiana iray amin'ireo fotoana iasantsika asa ary alefaso ny résumé anao.
Manaova aingam-panahy. Midira amin'ny ekipan'ny Hodges University anio!
Mikaroha asa ahazoana asa
Momba ny asa Hodges
Resadresaka nifanaovana tamin'i Gloria Wrenn, talen'ny Human Resources:
Inona ny zavatra tsara indrindra momba ny fiasana ao amin'ny Oniversiten'i Hodges?
"Ny antony telo voalohany dia:
Ireo olona miasa eto. Hodges ho an'ny maro dia fianakaviana faharoa, ary mbola tsy nahita olona maro toy izany aho ary niara-niasa mafy ho an'ny tanjona iraisana hahatonga an'i Hodges ho oniversite tsara indrindra tsy any SW Florida ihany, fa na aiza na aiza.
Manana mpiasa marobe sy isan-karazany koa izahay - ny olona rehetra eto dia avy amin'ny toeran-kafa - ary heveriko fa noho izany ny mpiasa dia manaiky kokoa ny olona avy amin'ny kolontsaina na fiaviana hafa.
Izahay dia fikambanana tena manavao ny fomba anolorantsika kilasy amin'ny mpianatra, ary nanjary andrim-panjakana malemy paika ary afaka miova haingana araka izay ilain'ny oniversite na ny fampianarana ambony. "
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny asa amin'ny Hodges U?
“Ny Oniversiten'i Hodges dia miorina amin'ny campus tsara tarehy any Fort Myers, Florida, izay tsy misy sigara, ary nahazo Toerana fiasana faritra manga fanendrena, (andrim-pampianarana ambony voalohany nanao izany tany amin'ny faritra) izay mamporisika ny fahazarana mahasalama. Ho fanampin'izay, ny laharam-pahamehana manontolo dia misy fonosana tombony azo amin'ny fanasoavana, izay mety misy ny tombontsoa ara-pahasalamana, ny fiantohana ara-piantohana ary ny fialana amin'ny saram-pianarany.
Fanandraman'ny mpampianatra sy ny mpiasa
Inona no zavatra tsara indrindra amin'ny fiasana eto?
“Miova ny fijerena ny fiainan'ny mpianatra. Mampisy dikany ny zavatra ataoko rehetra eto izany, ” Teresa Araque, AVP Marketing / Public Information Officer
“Fianakaviana. Manana ny fianakaviako "tokantrano" sy ny fianakaviako "asa" aho ary tsy afaka nanao raha tsy nisy iray. Manana andro adala toy ny fikambanana hafa rehetra isika, saingy amin'ny faran'ny andro dia tena miavaka ny zavatra ataontsika eto. Tonga eto ny olona hanova ny làlan'ny fahasambaran'ny ankohonany manontolo ary afaka manampy izahay, ” Erica Vogt, filoha lefitra mpanatanteraky ny asa fitantanan-draharaha
"Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra amin'ny fiasana ao amin'ny Oniversiten'i Hodges dia ny kolontsaina akaiky sy manampy ny mpiasa ao aminay. Izy ireo no vondrona olona be fandavan-tena sy matihanina indrindra nananako tombontsoa niara-niasa, ” John D. Meyer, DBA, Filoham-pirenena
Fialana andraikitra amin'ny asa
Hodges University dia mpampiasa mitovy vintana ary tsy manavakavaka noho ny firazanana, loko, fivavahana, miralenta, fironana ara-pananahana, fiaviana nasionaly, taona, kilemaina, na toetra voaaro hafa rehetra araky ny lalàna amin'ny fampiasany asa. Ny tolotra asa rehetra dia miankina amin'ny fahombiazan'ny fanamarinana ifotony sy fitsapana zava-mahadomelina.
Hodges University dia oniversite tsy miankina, tsy miankina amin'ny fanjakana, any atsimo andrefan'ny Florida izay manompo ny olon-dehibe mpianatra.
Hodges tatitra momba ny fiarovana isan-taona (Fampahalalana sy politika i Clery Act) ary ny statin'ny heloka bevava dia hita ao amin'ny: Pejy fampahalalana ho an'ny mpanjifa. Ny tatitra momba ny fiarovana dia mamaritra ny drafitra fiarovana isan-taona an'i Hodges ary ny tatitra momba ny heloka bevava dia mitanisa ny isan'ireo karazana heloka bevava natao tany amin'ny campus na akaiky azy ireo isan-taona.
Raha toa ka mihatra amiko ny lalàna mifehy ny Data General Protection ("GDPR"), dia manaiky aho amin'ny fanodinana ny angon-drakitra manokana izay nofaritan'ny GDPR ho an'ireo tanjona voatanisa sy omena ao amin'ny politikan'i Hodges, araka ny fanitsiana indraindray fotoana. Fantatro fa amin'ny toe-javatra sasany, dia manan-jo hanohitra ny fanodinana ny Data-ko manokana aho. Azoko bebe kokoa fa manan-jo hangataka (1) fidirana amin'ny Data-nao manokana aho; (2) fanitsiana ny lesoka na lesoka ary / na ny famafana ny angon-drakitrao manokana; (3) izay Hodges mametra ny fikirakirana ny angon-drakitrao manokana; ary (4) fa i Hodges dia manome ny Data momba ahy manokana arakaraka ny fangatahana amin'ny endrika azo entina.